သတင်းစုံ – Page 339 – မြန်မာပြည်သတင်းစုံ
မိန်းမကို တွေ့ချင်နေပြီ ၊ခုတော့လွမ်းနေပြီ ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီ
ပရိသတ်တွေကြားမှာ မီမောင်နှံအဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ ပရိသတ်တွေအားကြရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲ တစ်တွဲဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအစက လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လက်ရှိမှာတော့ တစ်နိုင်ငံစီမှာ ရှိနေကြပြီး အရမ်းကိုလွမ်းနေကြပါတယ်။ ဒါရိုက်တာဏကြီးက ပြည်ပမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ ဇနီးချောလေးပိုင်ဖြိုးသုကို ယခုအချိန်မှာတော့ လွမ်းနေတက်ပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးက သူမ စစသွားခြင်းမှာတော့ အလုပ်တွေပိနေပြီး အလုပ်တွေကို ဖိလုပ်နေခဲ့ကာ နေနိုင်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် ၃ပတ်လောက်အကြာမှာတော့ မနေနိင်တော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ Read more
သေဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူနဲ့ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်
ချစ်သူနှစ်ဦး အကြာကြီး တွဲလာခဲ့ကြပြီး လက်ထပ်ဖို့လည်း အစစ အရာရာပြင်ဆင်ထားပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ တစ်လအလိုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံရကြရပါမလဲ..? ဘယ်သူကမှ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ကြလိမ့်မယ် မထင်မိပါဘူး။ ပုံမှန်သာဆိုရင် ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံတဲ့အခါ မင်္ဂလာပွဲပျက်ဖို့ သေချာနေပေမယ့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့က Dan Thien ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးကတော့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားမှာပဲ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ ရှေ့မှောက်မှာ ကတိအတိုင်း လက်ထပ်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗီယက်နမ်သတင်းစာ Nguoi Dua Tin ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Read more
အိမျပိုငျမရှိတဲ့ လူရှငျတျောမြားအတှကျ အိမျပိုငျ ရရှိတော့မညျဖွဈကွောငျးပွောလာတဲ့ ဦးကောငျးကြျော…..😱😱😱
ဟာသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်ဟာဆိုရင် ရွှေညီအစ်ကို ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု များစွာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ဟာသ ပညာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲပျော်ရွှင်စေခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဦးကောင်းကျော် ပြောထားတဲ့ အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့ လူရွှင်တော်များအတွက် အိမ်ပိုင် ရရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ” လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသားများခင်ဗျာ မကြာမီပေါ်ထွက်လာမည့်အိမ်ယာစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုတွင် အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိသော လူရွှင်တော်များအတွက် အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် ရရှိရန်အတွက် အစီအမံများစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် အသင်းဝင်ကဒ်မပြုလုပ်ရသေးသော အသင်းသားများ သည်။30-9-2019 နောက်ဆုံးထားပြီး Read more
​ခေတ်​မှီနည်းစနစ်​နဲ့ ထုပ်​ပိုးပြီးဖြန့်​ချိလိုက်​လို့ ပစ္စည်းပြတ်​သည်​အထိ ​​ဈေးကွက်​​ပေါက်​သွားတဲ့ အညာထန်းရည်​ချို…
​ခေတ်​မှီနည်းစနစ်​နဲ့ ထုပ်​ပိုးပြီးဖြန့်​ချိလိုက်​လို့ ပစ္စည်းပြတ်​သည်​အထိ ​​ဈေးကွက်​​ပေါက်​သွားတဲ့ အညာထန်းရည်​ချို… ထန်းရည်​ချိုဆိုဒါ ထန်းရည်​ချိုဆိုဒါပုလင်း​လေးနဲ့ ​နောက်​ခံအလှ ကုန်​စည်​ပြပွဲမှ ထန်းရည်​ချိုဆိုဒါ SUGGESTED NEWSMgid အစားမလျှော့၊အားကစားမလုပ်ဘဲ ၄၅ ကီလို ဘယ်လိုဝိတ်ချမလဲ Greencoffee ဤရှကေ့ား2ဟငျးသီးဟငျးရှကျညတှငျးခငျြးသငျ့ဗိုကျအဆီသတျနိုငြ! Biotrimlabs ဗိုက်အဆီချနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Green Coffee အဆင်မြင့်နည်းပညာရယ် လှပတဲ့ထုတ်ပိုးမှုရယ် အညာဒေသထွက်ကျေးလက်အရသာရယ် အတူတကွ ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ……. အားပါးပါး ရောင်းမလောက်တဲ့ ရိုးရာထွက်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလေရောဗျာ ….။ ကိုယ်တွေဆီမှာ မိုလာပုံးနဲ့သွားဆွဲရင်တောင် ၅၀၀ လောက်ပဲပေးရတဲ့ Read more
ထီလက်မှတ်တစ်စောင်ချင်းစီကနေ ဆုအသီးသီးပေါက်ခဲ့တဲ့ လွင်မိုး
သရုပ်ဆောင်လွင်မိုးဟာ ၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းဆု ထီမှာတော့ သူ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီလက်မှတ် ၄ စောင် စလုံးက ထီပေါက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျပ် တစ်သိန်းဆု အတွက် ထီလက်မှတ် တစ်စောင်၊ ကျပ် ၅ သောင်းဆုအတွက် ထီလက်မှတ် ၃ စောင် တုိ့က ထီပေါက်ခဲ့တာပါ။ ‘’ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်သိန်းခွဲ’’ ဆိုပြီးတော့ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Read more
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ စကားတတ်လွန်းတဲ့ သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ထိပ်ထားသခင်၊ ခေတ်ခေတ်နဲ့ ကိကိ တို့ကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ထိပ်ထားသခင်၊ ခေတ်ခေတ်နဲ့ ကိကိ တို့ရဲ့ အပြုအမူလေးတွေက ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အသည်းတွေကို အရည်ပျော်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ထိပ်ထားသခင်၊ ခေတ်ခေတ်နဲ့ ကိကိတို့ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Pregnancy And Kids Carnival ပွဲမှာ အတူတကွ တွေ့မြင်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် Kid Celebrity တွေဖြစ်ကြတဲ့ သမီးလေး ထိပ်ထားသခင်၊ Read more
၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆုကို မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ငန်းတေးရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းစောင့်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးဝင်းကဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ကိုကျော်မျိုးဝင်းခေါ် အုန်းသီးဟာ ငန်းတေးအထကခွဲကျောင်းမှာ ကျောင်းစောင့်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ကိုကျော်မျိုးဝင်းဟာ မိုးယံရွှေလမင်းနဲ့ မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ရဲ့ ထီစောင် ၅ စောင်တွဲကနေ ထီဆုကြီးဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာပါ။သူဟာ အဲဒီ ထီ ၅ စောင်တွဲကို အကြွေးနဲ့ ထီရောင်းပေးနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဆီကနေ ဝယ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသိန်းဆုကြီးပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုကျော်မျိုးဝင်းဟာ သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင်ခန်းမဆောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးသွားမယ်လို ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ထီးဆုကြီးပေါက်သွားတဲ့အတွတ် တခြား ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေကိုတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ Read more
ဟိုနေ့ကဆို ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့မိသားစုရဲ့ နမ်းနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန် မျက်ရည်တောင်ကျတယ်ဆိုတဲ့ သွန်းဆက်
သွန်းဆက်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွန်းဆက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ကျခံနေရတဲ့ ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ “လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့နော် ဟိုနေ့ကဆို ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတတ်လာတာ သူတို့မိသားစုနမ်းနေတဲ့ပုံလေးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မျက်ရည်တောင်ကျတယ် သူတို့ကသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတာဆိုတော့ အားငယ်မှာပဲလေ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်အမိမြေမဟုတ်တဲ့အတွက် အကုန်လုံးကအားငယ်မှာပဲလေ ” ဆိုပြီး myanmar loadtvမှာဖြေကြားထားခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ “နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေအတွက် လုံခြုံပြီး အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်လို့ ရအောင် တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီး Read more
အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားပြီး မိသားစုကို အချိန်ပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းလို့ ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲတစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောသဇင်နွယ်ဝင်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့သူမကအိမ်ထောင်သက်တမ်းမကြာသေးခင်မှာပဲ သားလေး တစ်ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အသဲကျော်လေး ဖြစ်လို့နေပါတယ်နော်။သူမကတော့ ဒုတိယမြောက် ကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရပြီး သမီးလေးဖြစ်နေတဲ့ အတွက်လည်း ပျော်ရွှင်နေပါသေးတယ်။ မကြာမီ မိသားစုဘ၀လေးထဲကို သမီးလေး ရောက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်သည့်အတွက် သားသာလေး Peach ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေရှင်းနေတုန်း Read more
ချစ်သူရဲ့ မျက်ဝန်းလေး တစ်စုံကိုချပြလိုက်တဲ့ လူပျိုကြီး ဇွဲနိုင်ဝင်း
တစ်ချိန်က ဗွီဒီယို ဇာတ်ကားများစွာကို သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇွဲနိုင်ဝင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားများစွာရှိသလို သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဒွေးနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့မင်းသားတစ်ဦးဆိုပြီးလည်း နာမည်ကြီးသူပါ။သူ့ရဲ့ တစ်ချို့ အိုက်တင်တွေကလည်း ဒွေးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သရုပ်တောင် ဇွဲနိုင်ဝင်းက သူရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ချစ်သူလေးရဲ့ မျက်လုံးလေး တစ်စုံကို ချပြထားတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခုအချိန်ထိ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း က ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေး ရဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ ဇွဲနိုင်ဝင်းက Read more
Previous 1 … 338 339 340 … 827 Next